Baaldi-qodayaasha, Rinjiraha Xeel-dheereyaasha, Isku-duwaha si dhakhso leh u qoda - MINYAN
qodista MINI BUCKET
qodista SIEVE BUCKET
qodista DHISMAHA DHEXE
qodista BULKET DHULKA
nagu saabsan maxaa xiga
Xuzhou Minyan Import & Dhoofinta Co., Ltd., oo ku yaal mashiinnada dhismaha ugu caansan magaalada Xuzhou, Shiinaha. waa ganacsi hi-tech gaar loo leeyahay oo isku dhafan naqshadeynta, wax soo saarka iyo iibinta Dukaanka EXCAVATOR ROCK BUKKET, EXCAVATOR EARTHMOVING BUKKET, EXCAVATOR SIEVE BUCKET, BUKKET Ilkaha, EXCAVATOR RIPPER, EXCAVATOR QUICK COUPLER dhamaan noocyadeenu waa ku habboon yihiin. Sida CAT, XCMG, KOMATSU, BOBCAT, SHANTUI, HYUNDAI never Marnaba ma joojinayno wanaajinta, waxaan dooneynaa inaan noqono kuwa ugu fiican warshadan, inaad ahaato mid lagu aaminay Excavator Bucket Manufacturer. Waxaan sugeynaa inaan kula shaqeyno!
muuqaalka qalabka la isticmaalay
Tayada Koowaad, Qiimaha Koowaad, Amaahda Koowaad
Waxaan inta badan soo saareynaa dhammaan noocyada baaldi qodista, sida baaldi Mini, baaldiga dhulka lagu sameeyo, baaldiga dhagaxa, baaldiga shaashadda, lamaanaha degdegga ah, ilkaha baaldiga iyo kuwa kale ee si fudud loo jeex jeexay loona kala jeexay. Waxaan sidoo kale soo saari karnaa dhammaan noocyada kala duwan ee baaldirada wax lagu qodo si waafaqsan shuruudahaaga. Baaskiiladayada Xaaqida waxay u dhigmaan mashiinka shaqada waxayna ku siiyaan waxqabadka ugu fiican ee suurtogalka ah dalabkaaga gaarka ah. Hadday tahay dhagaxa, goobta dhismaha ama dhirta - Baaldiyadeenna Qodda waxay diiradda saaraan awoodda buuxda iyo waxqabadka mashiinka hawsha gacanta ku jirta oo si hufan u dhammaystiraan hawsha. Soo dhawaynta baaritaanka waxaan damaanad qaadi karnaa qiimaha ugu hooseeya oo leh tayada ugu sareysa.